गाजरको हलुवा बनाउने तरिका र यसका फाइदा
Fri, Feb 21, 2020 at 9:53am
बुधबार, ६ मंसिर २०७४,	आहाखबर	8.76K
गाजरको हलुवालाई स्वादिष्ट परिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । गाजरको हलुवा स्वादिलो हुनुका साथै पोषिलो पनि हुन्छ । गाजर सलादको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । शेष गरेर तपाईले गाजरको हलुवा जाडो याममा बनाएर खान सक्नु हुन्छ । यो परिकार बनाउने विधि यस प्रकार छ ।
आवश्यक सामाग्री –
गाँजर १ किलो, दुध ३ पाउन, चिनी आधा किलो, बदाम आधा कप(टुक्रा गरेर काटेको), अलाईची १ चम्चा (धुलो), सुकमेल १ चम्चा (धुलो), घिउ १ चम्चा
पकाउने बिधि –
– गाजरलाई मसिनो पारेर कोरेसोमा कोरने र कोरिसकेपछि पानीमा राखेर उमाल्ने ।
– गाजर राम्ररी पाकेपछि एउटा कपडामा राखेर पानी छान्ने ।
– दुधलाई बाक्लो हुने गरि उमाल्ने अनि चिनी राखेर दुधलाई बाक्लो बनाउँने ।
– आवश्यक मसला र गाजर सबैलाई भुटेर दुधमा हाल्ने अनि राम्रोसँग चलाउने ।
– लेदो बनेर जमेपछि आँचबाट उतार्ने । गाँजरको हलुवा तयार भयो ।
– गाजरको हलुवा माथि नरिवलको धुलो, सुकमेलको धुलो, बदामको धुलो अलिअलि छर्कने जसले गर्दा राम्रो दखिन्छ ।
गाजरमा उच्च मात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । यो आँखा, छाला, पाचन प्रणाली र दाँतका लागि लाभदायी हुन्छ । यसमा अत्यन्त न्युन मात्रामा क्यालोरी पाइन्छ भने चिल्लो पदार्थ शुन्य हुन्छ ।
गाजरका फाइदा –
रतन्धो हुनबाट बचाउछ –
गाजर खानु आँखाको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ । यसमा भएको बेटा क्यारोटिन कलेजोमा भिटामिन ए मा परिवर्तन हुन्छ । यसले रतन्धो हुनबाट समेत बचाउँछ ।
मुटुको रक्षा गर्छ –
गाजरमा विभिन्न प्रकारका एन्टिअक्सिडेन्ट र पोलासिटाइलनेस भन्ने तत्व पाइन्छ । जसले मुटुको कवचको काम गर्छ । अध्ययनहरुबाट गाजरमा भएका यस्ता तत्व खानाले मुटु रोग लाग्ने खतरा कम हुने देखाएका छन् । उच्च मात्रामा बेटा क्यारोटिनका अतिरिक्त गाजरमा अल्फाक्यारोटिन र ल्युटन पाइन्छन् । यसले खराब कोलस्टेरोललाई पनि हटाउँछ । यहीकारण हृदयाघात हुने सम्भावना पनि रहँदैंन ।
क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ–
गाजर खानाले फोक्सो, स्तन तथा कोलोन क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ । गाजरमा भएको पोलि–अक्टिलाइन एन्टिअक्सिडेन्ट र फाल्कारिनोल भन्ने तत्वका कारण यस्तो भएको हो । यी तत्वले क्यान्सर लगाउने कोषलाई नष्ट पार्छ ।
रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ –
गाजरमा भएका विभिन्न खालका पोषक तत्व र भिटामिन सी सहितको एन्टिअक्सिडेन्टले रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
दाँतका लागि लाभदायी –
यसले दाँतका लागि टुथब्रस र टुथपेष्टजस्तै काम गर्छ । गिजा बलियो बनाउछ र थुप्रै मात्रामा र्याल उत्पादनमा सहयोग गर्छ, यस्तो र्यालले दाँतमा एसिड उत्पादन र सडनबाट उत्पादनबाट हुने ब्याक्टेरिया हटाउन अल्कालाइनको काम गर्छ । गाजरमा हुने खनिज तत्वले मुख र दाँतको सडनका लागि जिम्मेवार किटाणुलाई मार्न सहयोग गर्छ ।
बुढोपन रोक्छ –
यसमा भएको बेटा क्यारोटिनले एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ, जसले शरीरका कोषहरुको क्षति हुनबाट बचाउँछ । जसले गर्दा मानिस चाँडै बुढो हुँदैंन ।
महिलाको महिनावारीमा लाभदायी हुन्छ –
गाँजरको जुस महिलाका लागि निकै लाभदायी हुन्छ । यसमा भएको फाइटोएस्ट्रोजनले महिनावारीमा हुने पीडाबाट मुक्ति दिलाउँछ र बढी रक्तस्राव हुनबाट जोगाउँछ । यसले महिनावारी सम्बन्धी अन्य समस्या पनि हटाउँछ ।
हड्डी मजबूत पार्छ –
गाजरमा हुने क्याल्सियमले महिला तथा केटाकेटीको हड्डीको विकासमा सहयोग गर्छ ।
पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउछ –
गाजर फाइबरको महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसले खाना राम्रोसंग पच्न मद्दत गरी दिसालाई नियमित बनाउछ ।कब्जियत हटाउछ ।
ब्लड सुगर नियमित गर्छ –
गाजरमा उच्चमात्रामा पाइने क्यारोटेनोइड्सले ब्लड सुगरलाई नियमित पार्छ । यसमा पाइने अल्कालाइन तत्वले रगतलाई शुद्ध पार्छ र शरीरमा एसिड अल्कालाइनको दरलाई सन्तुलित राख्छ । यसमा पाइने पोटासियमले सोडियमलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
छाला चम्किलो पार्छ –
भिटामिन सि र एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त हुने भएकाले गाँजरको नियमित सेवनले छालालाई स्वस्थ र चम्किलो पार्छ । छाला चम्काउन गाजरको पेष्टमा मह मिसाइ फेस मास्कका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, गाँजरको जुसले छालामा भएका धब्बाहरु हटाउन मद्दत गर्छ ।
जाडोमा यस्ता खाना खानु हुन्छ स्वस्थकर
मह खानुअघि यी कुरामा होस पुर्याउनुहोस्
जाडो मौसममा के खाने, के नखाने ?
केराबाट मःमः देखि समोसासम्म
शाकाहारी सम्झेर खाने यी ५ कुरा शाहाकारी हुँदै होइन !
किन यती धेरै बफ मःम बिक्छ काठमाडौंमा ?
कसरि बनाउने सेल रोटी ?
यसरि बनाउन सकिन्छ घरमै स्वादिष्ट चिकेन बिरयानी
स्वस्थ मानिसले कति मासु खाने ?
दसैंमा के खाने, के नखाने ? चिकित्सकका टिप्स
बाँसको तामाको तपाईं अचार, तरकारी वा सुप, के खानुहुन्छ ? यस्ता छन् फाईदा
च्याउ खानुको यस्तो छ फाइदाहरु !!!
रेसेपी : आटाको रंगीन स्वादिलो र स्वास्थ्यकर मम
घरमै यसरि बनाउन सकिन्छ सोनपापडी
घरवासको आकर्षण आलुका परिकार
चाडपर्व नजिकिँएसँगै ह्वात्तै बढ्यो मासुको मूल्य
अनदीको चामल पाउनै मुस्किल, प्रतिकेजी २२५ मा बिक्री !
यसरि घरमै बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट पुष्टकारी
शुक्रबारदेखि ह्यात होटलमा चाइनिज फुड फेस्टिवल
संसारकै महंगो आलु चिप्स, १ प्याकेटकाे ६ हजार
म:म सम्बन्धि ५ राेचक तथ्य
अब काठमाडौँमै जापानी खाना ‘रामेन’
बहुगुणी मेथीबाट बनाउन सकिन्छ यस्ता परिकार
स्वादिष्ट साथै स्वस्थकर यल्लो लाफिंग बनाउने सजिलो तरिका
भान्सालाई यसरी बनाउनुहोस् पोषिलो
गर्मीका लागि एक उपयुक्त पेय लस्सी, घरमै यसरी बनाउनुहोस्
बाक्लो गरी दूध नउमाले स्वादिलो हुँदैन दहीको राजा जुजु धौ, फस्टाउँदै व्यवसाय
यसरी बनाउनुहोस् स्वादिष्ट फ्राइड राइस